Korona Fayras: ‘Maalintii Aan Qorsheynayay Inaan Hadiyad Siiyo Ayaan Meydkeeda Aasay’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
BBC Somali — April 15, 2020
Isbuucyadii ay soo dhawaaneysay maalinta hooyada ee sanad walba laga xuso dunida gabadha 33 jirka ah ee lagu magacaabo Aya (oo aan ahayn magaceeda dhabta ah) waxay ku mashuulsaneyd inay ka fikirto nooca ay noqon karto hadiyadda ay hooyadeed u geyn doonto maalintaas. Laakiin waxba kama aysan ogeyn inay isla maalintaas meydkeeda aasi doonto.
Aya hooyadeed waxay ka mid ahayd 10-kii qof ee ugu horreysay ee Masar ugu geeroyootay xanuunka coronavirus.
Inkastoo dowladda Masar ay bartamihii bishii February ku dhawaaqday inuu gaaray cudurkan lagu magacaabay Covid, haddana isbuucii ugu horreeyay ee bishii March unbaa la dareemay in kiisaska ay isdabajoog noqdeen. Ilaa hadda in ka badan 2,000 oo qof ayuu Masar kula dhacay coronavirus, ugu yaraan 160 ruuxna way u geeriyoodeen cudurka.
‘Waxaan rabaa inaan laabta ku galiyo laakiin iima suurtagaleyso’
Inkastoo hooyadeed ay muddo hal isbuuc ah iska liidatay, Aya marna kuma soo dhicin inaysan xanuunkaas ka kici doonin. Waxay ka warrameysaa markii geerideeda loo soo sheegay oo ay istaagga ka dhacday. “Walaakey waxaan ku dhahay been baad ii sheegeysaa. Xilligaas mar ka horreysay ayuu ii soo sheegay inay xaaladdeeda sii wanaagsanaaneyso,” ayey tiri Aya.
“Waxaan rajeyneynay inay guriga dib ugu soo laaban doonto xilli ka horreeya maalinteeda dhalashada oo ku aaddaneyd bisha April dhexdeeda, maadaama isbitaalka la dhigay maalmo ka hor markii ay ku aaddaneyd Maalinta Hooyooyinka Adduunka. Waxaan isku diyaarineynay inaan isku darno dabaaldagga maalinta hooyooyinka iyo maalinta dhalashadeeda.”
Aya hooyadeed waxaa loo qaaday xarun karantiil oo ku taalla isbitaalka degmada Helwan ee koonfurta magaalada Qaahira, halmaalin ka hor geerideeda kaddib markii laga helay Covid-19. Haweeneydaas oo 69 jir ahayd waxay markii hore ku sugneyd isbitaal si gaar ah loo leeyahay, halkaasoo ugu horreyntii looga waayay cudurka coronavirus.
Balse maalmo kaddib ayaa lagu celiyay baaritaanka, sida ay sheegtay Aya. “Markii ugu dambeysay ee aan la hadlay waxay ahayd maalintii talaadada ahayd ee isbuucaas… Waxaan la joogay aabahay oo isagana xanuunka laga baarayay.”
Dhibaatada Aya qabsatay kaliya ma ahayn inay hooyadeed ka dhimatay iyadoo aan macsalaameynin. Isla maalintii ay geeriyootay, waxaa la xiray dhammaan masaajidyadii waddanka Masar, lamana oggoleyn in meel qura lagu wada duceynto ama qof loogu duceeyo. Sidaas darteed, Aya waxay ku khasbanaatay inay janaasada meydka hooyadeed kula tukato isbitaalka dhexdiisa.
Xitaa howsha la xiriirta in meydka laga soo saaro isbitaalka waxay ku qaadatay waqti dheer, markii dambena waxay aaseen xilli habeenimo ah. “Tiro aad u yar oo ka tirsan qoyska ayaa timid aaska. Dhammaanteen waxaan xirneyn gafuur-xir iyo gacma-gashi. Gabadha walaalkey xaaskiisa ah ayaa gacanteyda qabatay waxayna igu tiri: ‘Waxaan jeclaan lahaa inaan laabta ku galiyo laakiin iima suurtagaleyso’. Sidoo kale walaalkey soddohdiis aad bay u murugeysneyd. Laakiin ma jirin qof naga mid ah oo kan kale maslixi karay.”
“Aabahay qudhiisa uma suurtoobin inuu hooyadey macsalaameeyo. Wuxuu ka qeyb galay aaska laakiin markaas hal isbuuc ka hor ma uusan sii arkin”.
Kaddib markii ay hooyadeed geeriyootay, Aya aabaheedna waxaa la geeyay isla goobtii hooyadeed lagu karantiilay, maadaama isagana laga helay cudurka Covid-19. “Markii aabahayna la kaxeeyay, waan xamili waayay murugada. Waan iska barooranayay anigoo dhulka jiifa,” ayey tiri.
Ugu dambeyn aabaheed wuu ka caafimaaday cudurka, wuxuuna guriga kusoo laabtay isbuucii lasoo dhaafay. Inkastoo Aya iyo walaalkeed aan laga helin coronavirus, haddana wali waxay ku jiraan iskaliyeelid.
Tags: Korona Fayras: 'Maalintii Aan Qorsheynayay Inaan Hadiyad Siiyo Ayaan Meydkeeda Aasay'
Next post Haweenayda 50 Sano ka Hor Ogaatay Cudurka Korona Fayraska
Previous post Korona Fayras: Maxay Dadka Waaweyni Ugu Nugul Yihiin Cudurada?